आफ्नै श्रीमानले म एक जना केटी लिएर आउँछु तिमी नरिसाउ है भन्दै आखै आगाडी श्रीमानले अरु केटिसँग सम्बन्ध राखे ? हेर्नुहोस – Dailny NpNews
आफ्नै श्रीमानले म एक जना केटी लिएर आउँछु तिमी नरिसाउ है भन्दै आखै आगाडी श्रीमानले अरु केटिसँग सम्बन्ध राखे ? हेर्नुहोस
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन २५, २०७८ समय: २१:०९:१७
उनले मन मिल्दा सम्म त्यस्ता भिडियो साटासाट गर्ने तर मन मिल्न छोडेपछि त्यो भिडियो अरुलाई सार्वजनिक गर्ने गरेको घटना आफुले थाहा पाएकाले त्यस्तो भिडियो पठाउन मन नलाग्ने बताएकी छन् । उनले अब छोरीको न्यायको लागि मात्र श्रीमानको खोजी गरेको बताएकी छन् । मलाई हेर्न पर्दैन, मलाई कुनै आश पनि छैन । हिँजो पनि हेरेको थिएन अब झन मलाई के वास्ता गर्ला र तर छोरी ७ वर्षको भइसकिन् छोरीको न्यायको लागि आफुले श्रीमानको खोजी गरेको उनको भनाई छ ।
श्रीमान विदेशमा छन् । ५ वर्ष देखि सम्पर्क विहिन भएपछि उनी काखमा छोरी लिएर उनलाई खोज्न हिडेकी हुन् । मिडियामा कुरा सार्वजनिक गरेपछि श्रीमान सम्पर्कमा आउने आशमा उनले आफ्ना कुरा सार्वजनिक गरेकी छन् ।